Zvinhu zvinomwe muhupenyu zvauri kutora kuti ubvumirwe - Blog
7 Zvinhu Muhupenyu Zvauri kutora kuti Zvipiwe
Munyika yevatengi uye inongogara ichisimudza pasocial media, zvinogona kuve zvakaoma kuzviwisira pasi dzimwe nguva.
Kutora zvinhu sekurerutsa chinhu icho vazhinji vedu tine mhosva nacho, asi zvakare chimwe chinhu chiri nyore kugadzirisa.
Ndakapedza mazuva makumi matatu ndichiita yekutenda kwemazuva ese - ndichifunga zvinhu zvitatu zuva rega rega zvandaitenda uye ndichifungisisa nezvazvo.
Izvi ndizvo zvepamusoro zvinhu zvinomwe kubva pane zvandanyora.
1. Nzvimbo Yakachengeteka Yekugara, Kudya, Uye Kurara
Vazhinji venyu muri kuverenga izvi vachange vachidaro kubva kunyaradzo yeimba yako, pamwe wakagara pasofa kana kutsigirwa nemamwe mamakusheni ari pamubhedha.
ndinonzwa sekuodzwa mwoyo kuvabereki vangu
Kuva nenzvimbo yekugara chingori chinhu chakajairika kune vazhinji vedu, uye zvechokwadi chimwe chinhu vazhinji vedu chatinotora kurerutsa.
Kuuya kumba kunogona kunzwa kunetsekana pane dzimwe nguva, sezvaungave uchitya kubata nemurwi muhombe wekuwacha kana kuwacha wawakasiya!
Ichokwadi chekuti iwe unotova neimba (kana kamuri) panokiya gonhi, mvura inomhanya kubva pombi, uye unogona kurara zvakanaka inoshamisa.
Vazhinji vedu tinogona kutora zvimwe zvekushandisa kurerutsa zvakare. Magetsi, mvura, uye kumwe kunochengetera chikafu icho chatinogona kudya zvinhu zvakanaka chaizvo 'zvekutanga, asi zvinoshamisa zvakadaro.
Zviri nyore kwazvo kunyunyuta nezvezvinhu zvidiki, asi kuve neimba kwaunogona kunzwa kuchengetedzeka, kudziya, uye kuzviitira kapu yeti zvirokwazvo chinhu chekutenda nacho .
2. Kuenda Kwako
Chokwadi, ihombe faff uye traffic inogona kutyisa, asi kuenda kwako hakudi kuve sosi yekushushikana kwemazuva ese.
Kana iwe ukatyaira kuenda kubasa, iwe unokwanisa kushandura mota yako mukirasi nekuodha pasi inonakidza podcast uye uchizvidzidzisa iwe pachako pane yakasarudzika chidzidzo panguva yega yega rwendo.
Kana shandisa rwendo rwako rwechitima kuti ushandise nzira yako kuburikidza nebhuku, kana kutozonyora zvako wega.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezvekufamba mumotokari yako kupedza nguva uri wega , kuteerera mimhanzi yaunoda pane chero vhoriyamu inokodzera moyo wako. Mushure mezvose, kangani kaunogona kuridza rwiyo rwumwe chete pakudzokorora kwemaawa pasina mumwe munhu anonyunyuta?
ndinofanira kumufuratira kuti awane pfungwa dzake
Chero vabereki kunze uko vanogona kuziva kuti ingani nzvimbo yekutizira iyo mota yako inogona kuve - sekuda kwaunoita vana vako, zvakanaka chaizvo kuva nenguva yekunyarara 'ini'.
Nyatsoshandisa rwendo rwako uye tenda kuti une nguva uri wega - uye nebasa rekuenda kwariri!
Kukwirirwa muhapwa yemutorwa pane metro hakuna kunaka, ndinobvuma, asi shandisa nguva ino kudzidzira kufungisisa uye tsitsi.
Kuzvipa iwe nguva yekunzwira tsitsi vausingazive zvachose kunoita zvishamiso zvepfungwa dzako uye zvinogona kubatsira chaizvo kukuisa mune yakanaka mamiriro.
Taura nevanhu pauri kuenda! Zvinogona kutaridza kutyisa uye kusanzwisisika, asi kunyangwe kudyidzana kudiki nemumwe munhu mutsva (kana munhu wenguva dzose waunogara uchiona munzira yekushanda) kunoita kuti unzwe zvakanaka nezvako.
Iwe haufanire kuva nemoyo kune moyo, asi kuchinjana kunyemwerera uye kufarira mune imwe hurukuro diki inzira yakanaka kwazvo yekuzvimisikidza iwe kuzuva racho.
Tenda nguva ino kuti ugadzire zviitiko zvitsva, uye ungango pikisa nzvimbo dzako dzekunyaradza.
3. Zvitadzo Zvidiki
Kofi dzisingagumi dzandinotenga zuva rega rega ndichishanda kazhinji dzinonzwa kunge chakakosha - zvishoma kuti ndigare ndakadzikama, asi zvakare kuchengetedza avo vakandikomberedza vakachengeteka!
Muchokwadi, aya madiki mahafi anofanirwa kunzwa sekurapa.
Ndine mari inokwana kuzvitengera chinwiwa chinonaka, chinonaka (uye slab rekeke, ngatitaure chokwadi), uye izvo zvinofanirwa kubata kukosha kupfuura zvazvinoita.
Kuva negirazi rewaini mushure mekushanda, kutenga imwe nyowani yehusiku kunze, kana kuwana imwe guac pane yako taco zvinhu zvese zvidiki izvo zvinotorwa nyore nyore.
zvekuita kana mukomana achidhonza
6 Misimboti Mitemo Iyo Isinganetsi Hupenyu Hwako Zvakanaka
Zvikonzero gumi zvekusatora hupenyu zvakanyanya
Nzira Nhanu Sense yeKukodzera Inozviratidza Iga
4. Maitiro Ako
Zviri nyore kwazvo kutora tsika yako seyakareruka, uye kunyatsovenga iyo!
Kuita chinhu chimwe chete ichocho mukati, zuva rekunze rinogona kunzwa kunge rinofinha uye risingafadzi, asi pane zvimwe zvakanaka zvekuita maitiro.
Iwe unogona kusazvinzwa mupfungwa dzako, asi muviri wako unonyatso kuonga maitiro awakagadzwa mairi.
Miviri yedu nepfungwa zvinoshanda zvirinani kana zvadzikama - kumuka panguva imwe chete zuva rega rega, kuve nenguva yekudya, uye kuenda kunorara panguva yakajairika husiku hwega hwega zvese zvinobatsira.
Zvinogona kuve nyore kukanganwa nezverudzi urwu rwezvinhu mushure mezvose, hazviwanzo kugara pasi tichinyatsofunga nezve hupenyu hwedu. Kuve uine purogiramu uye kurega muviri wako kuti ugare mairi kunoshanda zvishamiso!
Inotevera nguva iwe paunozviwana iwe uchimuka wega kweminiti alarm yako isati yarira, edza uye unzwe kuonga - pfungwa nemitumbi yedu inoshamisa, uye maitiro ako anovabatsira kuti vashande pazvakanyanya kwazvo.
Dzidzira rutendo kunyaradzo yemaitiro ako, uye tenda chokwadi chekuti une dzimwe tumaitiro tudiki twakadzika mauri.
Iwe unoziva divi resofa ndeyako, dumbu rako rinogunun'una kana uchinge wanonoka kwemaminitsi mashanu pakudya kwemasikati, uye tsika yako yemangwanani inobatsira kukumisira zuva racho.
5. Hutano Hwako
Ehezve, izvi zvaisungirwa kuita runyorwa!
Kuchave nevamwe vanhu vanoverenga izvi vanogona kunge vachirwara nechirwere chisingaperi kana chinotyisa.
Kune avo vasiri, hutano hwako ndechimwe chinhu chingangotorwa kunge chisina basa. Isu tinokanganwa kushamisa kunoita miviri yedu, uye chokwadi chekuti kazhinji vanongopopota mumashure pasina zvakanyanya sekuzorora chishamiso chechokwadi chehupenyu.
Isu kazhinji tinongoziva chete kunyatsoita kwatinoita kana isu kamwe kamwe tisina yakanaka kudaro. Kuedza kufema nemumhino dzako nechando kunoita kuti urangarire kuti kunoshamisa sei kufema zvakasununguka.
ndinoita sei kufara zvakare
Edza kuisa fananidzo iyoyo kumuviri wako nepfungwa zvakajairika. Hutano hwepfungwa hwakakosha uye chero munhu anotambura achaziva kuti zvinoshamisa sei kuti 'kubuda zvakare' mushure mechiitiko chakaipa.
Ivapo uye utende hutano hwako, uye rangarira kuti wakakomborerwa sei kuva nazvo.
6. Hushamwari nehukama
Zvinogona kubatsira uye kubatsira kugara pasi uye kufunga nezve vese vakakosha muhupenyu hwako.
sei kurega kuita godo musikana
Tarisa pafoni yako uye nenguva yaunosheedza Amai vako, mangani mameseji aunotumira kune mumwe wako uye mangani memes shamwari yako yepamoyo akakumaka nhasi.
Isu tinowanzo tora vanhu ava sevasina basa, uye, nepo zviri zvakajairika, zvakakodzera kutora nguva yekufunga kuti une rombo rakanaka sei.
Kuve munhu anofara uye ane hutano munhu anouya pasi kune zvakasiyana zvinhu, asi kukomberedzwa nevanhu vanotsigira vanoiswa mari muhupenyu hwako kunoita basa rakakura mairi.
Zvinoshamisa kwazvo kugona kutumidza vanhu mazita aunoda uye ane hanya nawo, uye zvakare zvinonakidza kugona kunzwa uye kuratidza izvozvo.
Kubvunza 'Makadii henyu?' zvakajairika kwatiri, asi funga nezve vanhu vane mhinduro yaunonyatsoitira hanya.
Icho chokwadi chekuti tine vanhu pane irwo runyorwa chinoshamisa kwazvo, uye zvirokwazvo chimwe chinhu chatinofanira kushandisa yakawanda nguva tichikoshesa.
Fungidzira maminetsi semari: inzira yakasarudzika yekutarisa zvinhu, asi nechikonzero.
Pane maminitsi gumi nemana nemakumi mana muzuva rega rega, izvo zvingangotaridza senge nguva yakawandisa, asi iri mari zhinji! Sekufananidza kwekare, fungidzira uine $ 1440 uye uchifanira kuishandisa yese nezuva rimwe - haugone kuichengeta uye haugone kuipa.
Zvinonzwika kunge zvinonakidza, handiti?
Iye zvino rangarira kuti madhora iwayo ari maminetsi chaiwo, uye kuti newewo unofanirwa kushandisa zvakanyanya zveizvi muzuva rimwe.
Nguva ine muganhu uye yakakosha, uye zvinogona kubatsira zvakanyanya kutora nguva yekunyatsonzwisisa izvo zvatiri mupenyu .
Zvinogona kurira kunge 'hippy dippy' asi kune mikana yakawanda uye zviitiko kunze uko zvekuti isu tinokwanisa kuwana, pamwe nenguva yekushandisa mumatunhu edu ekunyaradza.
Kunyangwe iwe uchida kugara mukati mechinyakare kana kudonhedza zvese uye nekufamba, iwe unayo nguva yekuzviita, uye izvo zvinoshamisa zvinoshamisa.
chokwadi iwe unofanirwa kuziva nezve hupenyu
zvinoratidza kuti hukama hwenyu hwapera
ndinoda kusiya hupenyu hwangu
maitiro ekuudza kana mumwe munhu ari kukushandisa muhukama
zvekuita ukasuwa mukomana wako zvakanyanya zvinorwadza